China sms na-abụghị akwa maka ndị na-emepụta ihe
Ndị na-ebunye egoAzụmaahịa
UloNgwaahịa & Akpụkpọ anụ NgwaahịaNhazi akwaNgwaahịa
China SMS na-abụghị akwa akwa maka nkpuchi ihu
önwa 4 ago
SMS na-abụghị akwa akwa (SpunBond + mellanbewn + spunbond). Ihe mejupụtara SMS na-abụghị akpa osisi bụ ngwaahịa nke nwere uru dị elu nke ike, arụmọrụ nzacha, enweghị ihe ọgbụgba, wdg ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ịkwado ihu ihu ịwa ahụ.
Enweghị asịsa natara
Anyị na-enye gị SS, SSS, SMS, SMMS, na akwa ndị ọzọ na-abụghị ndị uwe ojii iji gboo mkpa ọ bụla. Ihe akụrụngwa anyị na-eji bụ elu mfi polypyyyylene, nke nwere njiri mara nke oke, ike dị elu, na-egbu egbu, na-egbu egbu, nje na-egbu egbu, mgbochi nje na ndị ọzọ. Ọ na-enyere anyị aka ịme ka a na-anaghị akwụ ụgwọ na-ekwesịghị ekwesị maka ngwaahịa ahụike.
Anyị na-enye gị SS, SSS, SMS na-enweghị akwa, sms na-adịghị akwa akwa, na akwa ahụike ndị ọzọ na-enweghị mkpa iji gboo mkpa ọ bụla. Ihe akụrụngwa anyị na-eji bụ elu mfi polypyyyylene, nke nwere njiri mara nke oke, ike dị elu, na-egbu egbu, na-egbu egbu, nje na-egbu egbu, mgbochi nje na ndị ọzọ. Ọ na-enyere anyị aka ịme ka a na-anaghị akwụ ụgwọ na-ekwesịghị ekwesị maka ngwaahịa ahụike.
SMS: spunbend na-anaghị akwụ ụgwọ na-adịghị akwa abụba + na-egbu egbu na-enweghị eriri = atọ na-acha uhie uhie na-ekpo ọkụ.
SMS na-abụghị akwa akwa bụ akwa na-adịghị akwa, nke bụ ngwaahịa mejupụtara nke spuntonond na metlanberndo. O nwere uru dị na ike dị elu, arụmọrụ nke ọma, ọ nweghị ihe mgbochi, na enweghị nsi.
Ngwa nke SMS na-enweghị akwa: uwe elu / ịwa ahụ / ebe nchekwa / akpụkpọ ụkwụ / nkpuchi / akwa akwa / akwa akwa / akwa akwa / saiorats / saiotary / saiotary na akwa akwa / akwa akwa / saitary.
Njirimara na njiri mara nke SMS na-enweghị akwa
Ihe: polypropylene, metblawn
Ibu ibu: 10GM na 90GSM
Obosara: 20cm ka 320cm
Agba: acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha
MOQ: 1000Kg kwa agba
Nchikota: mpịakọta ngwugwu na-ada polybag
Ndị na-ebunye ego
Onye na-agụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ
I nwekwara ike ịmasị
100% spunbond Pp na-enweghị akwa akwa maka akwa akwa na-enweghị akwa akwa akwa maka Guangdong, China
Rayson - Factory na-enye 100% PP na-ejikọghị akwa maka arịa ahịhịa na-enweghị akpa, akwa akwa na-enweghị akwa
Rayson - matraasi na-egosiputa ihe ngosi pp spunbond na-enweghị akwa na-enweghị akwa akwa akwa akwa akwa akwa
Rayson - Up up up na-emepụta ihe na-enweghị atụ na-emepụta ihe na-enweghị polypropylene 100% ọhụrụ na-enweghị akwa akwa
Detuo Gee PP PUPSBand Pp SpinBond Folls na-akwụ ụgwọ maka ihe omume kachasị mma 100% Virgin Pp na-enweghị atụ maka Guangdong, China
Rayson - PP spunbed akwa na-abụghị akwa 60SM (OEM) maka ụlọ / Sofa / Wiver mkpuchi akwa
Rayson - ezigbo mma polypropylene matị mat lealo na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha ụlọ na-enweghị akwa akwa
A na-eji akwa akwa akwa na-enweghị atụ na-eku ume na akwa akwa na-enweghị akwa maka Guangdong, China
Ifuru na-ebukọrọ ngwongwo na-abụghị akwa a na-ejikọ mmiri maka ifuru maka ifuru maka ahịhịa maka Guangdong, China
Asụsụ gị ugbu a:
Ihe ngosiputa mmekorita nke vidiyo maka nkwalite ika uwa na ohere azuma ahia uwa
Gbasara Anyịamụma nzuzoUsoro Ọrụ
Email denye aha
Chọrọ ịbụ onye mbụ mara mgbe vidiyo ọhụrụ dị? Idenye aha na akwụkwọ akụkọ Email. Enweghị spam!